Wararka Maanta: Sabti, Dec 8 , 2012-Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya oo Xukun Xabsi daa'in ah ku ridday Taliyihii Ciidanka Asluubta
Maxkamaddu waxay sidoo kale isla maanta xukunno ku ridday eedeysanayaal kale oo uu ku jiray agaasimihii garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo mid ka mid ahaa dagaalyahannada Al-shabaab oo la sheegay in la qorsheyay in lasii daayo.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida, Col. Liibaan Cabdi Yaroow ayaa sheegay in taliyhii hore ee ciidamada Asluub Soomaaliyeed lagu eedeeyay inuu sameeyay qiyaanno Qaran taasoo ahayd inuu sii daayay maaxabiis Al-shabaab ka tirsanaa oo ay maxakamadda ciidamadu horay xukunno kala duran ugu ridday.
Sidoo kale, agaasimihii garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida, Xasan Axmed Cali (Xasan Liibiya) ayaa isna lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa falka lagu sii daayay maxaabiista ka tirsan Al-shabaab, taasna ay keentay in la xukumo.
"Maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku xukuntay, Cabdi Maxamed Ismaaciil xabsi daa'in, kaddib markii ay ku cadaadeen eedeymo loosoo jeediyay oo ahaa inuu sii daayay 14-xubnood oo Al-shabaab ka tirsanaa, sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay Xasan Liibiya shan sano oo xabsi ciidan ah, kaddib markii lagu helay in uu gacan ku siiyay taliyaha khiyaanada qaran ee uu sameeyay," ayuu yiri taliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida.
Taliyaha la xukumay ayaan ku sugnayd goobta uu xukunku ka dhacayay, waxanaa hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya amar lagu siiyay inay soo qabtaan Jen. Ismaaciil, iyadoo sidoo kalena la sheegay inuusan wax xil ah ka qaban karin dowladda lagana qaaday dhammaan darajooyinkii uu lahaa.
Dhanka kale, taliyuhu wuxuu sheegay in Muuse Ciise Nuur oo ka tirsanaa Al-shabaab oo la qorsheyay in lasii daayo uu dhameysanayo xabsigii horay loogu xukumay oo ahaa sideed sano oo xabsi ciidan ah.
Ugu dambeyn. taliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Col. Liibyaan Yaroow ayaa ku dhawaaqay in C/qaadir Maxamed Axmed oo ku eedeysnaa inuu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya lasii daayo, kaddib markii lagu waayay dambiga loo haystay.